Mamadika Ny Diky Ho Fidiram-bola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2014 21:04 GMT
Barikam-panariana maloto an'ny Clean Team Ghana miandry ny handefasana azy any amin'ny mpampiasa azy ireny ao Kumasi, Ghana tamin'ny 17 Oktobra 2013. Saripikan'i Nyani. Nahazoana alalana avy amin'ny Clean Team Ghana.
Mety ho tsy midika na inona na inona hoan'ny ankamaroan'ny olona izany, saingy hoan'ireo mpandraharaha ara-tsosialy, azo atao ho fitadiavam-bola goavana ireo fako avy amin'ny diky. Nasolo ny zezika simika ny fotaky ny diky, izay mora kokoa sy manankarena singa mineraly ary afaka ampiasaina amin'ny fambolena .
Nahatsapa ny tokony ampiasaina indray ny fako avy amin'ny diky, ny Clean Team Ghana (@cleanteamghana), orinasa momba ny fahadiovana ao Ghana izay mamatsy toeram-pivoahana vaovao sy takatry ny tokantrano an-drenivohitra tamin'ny fikarakarana karajia tamin'ny alalan'ny Twitter izay nanasana ireo manam-pahaizana manerantany momba ny fikarakarana fako avy amin'ny diky mba hizara ny hevitr'izy ireo amin'ny “Fomba Famadihana Ny Fakom-Piringa Ho oharanom-bola”. Nampiasa ny diezy Twitter #WasteOpportunities ny karajia tamin'ny 15 Aprily 2014.
Ity no karajia faharoa tao amin'ny Twitter nokarakarain'ny orinasa. Ny voalohany dia niresaka momba ny fomba fanafoanana ny fangerena an-dalambe ao Ghana izay niarahana tamin'ireo manam-pahaizana momba ny fanadiovana, ny manampahefana governemanta, orinasa ara-tsosialy sy fikambanana antserasera tamin'ny 24 janoary 2014.
Gavin Collins, mpampianatra ambony ao amin'ny Ivon-toerana Ryan ao Irlandy naneho hevitra hoe :
Te hiteny aho fa ny lanitra no fetra raha resaka vokatra sy tolotra azo vokarina avy amin'ny fakom-piringa.
Doreen Anim, mpitantana ny fidiram-bola ao amin'ny Clean Team Ghana, nanasongadina hoe :
Afaka avadika etanola sy metanola ampiasaina amin'ny solika famelomana milina izany
Nanondro ny fampiasana ny CO2 avy amin'ny fako i Andy Narracott:
Manana olana amin'ny fitantanana maharitra ireo tontolo iainan'ny zavamaniry ambanin'ny rano ao anaty kamory ireo toeram-panjonoana. Afaka mamaha ny olana ny CO2 avy amin'ny fako
Inona avy ireo olana goavana amin'ny famadihana ny firinga ho fahazoam-bola? Mpisera Twitter @ahiabor nanome valinteny iray:
Manana andraikitra avokoa ny Kolontsaina, ny Famatsiam-bola ary ny Fotodrafitrasa. Ohatra, mbola tsy manana rafitra fanarian-drano maloto isika.
Niombon-kevitra i Gavin Collins:
Misy ny ‘kasinga maharikoriko’ miraikitra amin'ny adihevitra momba ny fetezana sy ny fanekena ny vokatra sy ny fanaovan-draharahan'ny diky.
Naomi Kokuro nanoratra hoe:
Ny kolontsaina no sakana voalohany, fa raha vao tafala izany, dia tsy tokony ho olana loatra ny famatsiam-bola
Francis Kumadoh nandresy lahatra hoe:
Kasinga iray amin'ny fitantanana ny firinga ny kolontsaina
Namaly ny siokan'i Francis Kumadoh, Valérie Labi nanoratra hoe :
ary ny fofona ry zareo. misy ny volabe miandry amin'ny fitantanana ny dinganaeo amin'ny rojon-tsanda, ao amin'ny fivimbinana sy ny fitaterana ary ny vokatra farany.
Akua Akyaa Nkrumah, mpitantana ny zava-baovao ao amin'ny orinasa misahana ny fako Jekora Ghana, naneho hevitra hoe:
manana ny fijerinay amin'ny fako izahay, tsy misy ny fanohanana avy amin'ny governemanta, tsy misy ny renivola sy ny tsena ateraky ny fako
Super Yansh, orinasa misahana ny kojakojam-panadiovana mamatsy toeram-pidiovana an-tokantrano, nanoro-hevitra hoe :
Amin'ny famoronana vokatra ilaina avy amin'ny diky, tsy maintsy mihevitra momba ny soatoavina ara-kolontsaina sy ny finoantsika isika
Dan Smith, mpanoro-hevitra ara-teknika ao amin'ny Clean Team Ghana, nandresy lahatra hoe :
Raha mamadika ny diky ho fandrehitra indostrialy ianao, dia tsy vato misakana ny kolontsaina
Tsy niombo-kevitra amin'ny maha-fanamby goavana ny kolontsaina kosa i Andy Narracott :
Tsia – mahery ny vola. Niresaka tamin'ireo mpamboly kakao izay afa-po tamin'ny fampiasana zezika azo avy amin'ny fako, izay mora kokoa izahay!
Hans Doctor, masoivohon'ny Fanjakana Holandey ao Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone ary Togo nanoratra hoe :
Tokony takatry ny fahefa-mividy ny vidiny, raha tsy izany tsy hividy ny olona.
Climate Watch Ghana nanoro-hevitra hoe:
Tsy tokony hiompana fotsiny amin'ny vola azo ny resaka tombontsoa….hevero kokoa ny voka-tsoany amin'ny tontolo iainana.
Asantewa Monney nanamarika hoe:
Toa adinontsika fa tsy momba ny fakàna sy ny famadihana azy fotsiny ny fako fa resahina ihany koa ny fampiasana azy indray…tadidio ilay tavoahangy coca-cola
Mona Mij, mpanao sary indostrialy nisioka hoe:
Any amin'ny firenena mandroso: tsy maintsy atao manaitaitra ny fampiasana indray ny diky! Ahoana? Amin'ny firotsahan'ny vahoaka an-tsehatra, amin'ny fampiasana marika malaza sy ny fahaiza-mivarotra !